Momba anay | Linqing Meifule Precision Bearing Co., Ltd.
Guantao rehareha mitondra manufacturing co., Ltd.
(LINQING MEIFULE PRECISION BEARING CO., LTD) dia natsangana tamin'ny taona 2005, ary mamokatra manokana bearings baolina anaty lalindalina, block pillow ary bearings roller. Azonao atao ihany koa ny manao bearings manokana araka ny sary mpividy na santionany. Ny orinasa izao dia miorina amin'ny faritra indostrialy mitondra ny. Ny faritra indostrialy iray manontolo dia mandrakotra 80000 metatra toradroa ary manana ny rojom-pamokarana feno, izay afaka mamonjy ny vidin'ny famokarana ary manampy amin'ny hetsika mety.
Manomboka manondrana mivantana ny orinasa nanomboka ny taona 2015 ary nanangana ny orinasa mpanondrana (XIAMEN PRIDE BEARINGS CO., LTD) mba hanao serivisy tsara indrindra ho an'ny varotra. Ny vondrona mpivarotra dia manana mpiasa efa za-draharaha sy fitsipika ara-toekarena mahafinaritra ao an-tanànan'i Xiamen. Ary avy eo manaova rojo lavorary amin'ny hetsika famokarana, fivarotana ary aorian'ny fivarotana.
Miorina amin'ny teknikan'ny famokarana sy ny traikefa amin'ny fanaovana bearings baolina lalim-paka, ny orinasa dia nanomboka namokatra sakana ondana tamin'ny 2010. Avy amin'ny vy sy vy vita amin'ny vy hatrany amin'ny trano namboarina sy vita fitehirizana, nanapaka ny fizotry ny famokarana sy ny fizahana henjana izahay mandra-pahatongan'ny trano fitehirizana alohan'ny fandefasana. Aza hadino izany fa ny mpampiasa mihazakazaka manome fahafaham-po. Ary ny olona mpivarotra rehetra dia tsy maintsy manana fahalalana matihanina ho an'ny bearings sy ny saha mekanika, avy eo afaka manome soso-kevitra tsara ho an'ny mpividy ary mampihena ny vidiny farany ambany.
Ny vokatray dia ambany indrindra
Nankamamy ny traikefa rehetra izahay ary nandroso hatrany tamin'ity taona ity ary lasa matihanina kokoa amin'ny fitondrana tsipika.
1. Unit bearings UC, UK, SA, SB, ho an'ny andiany 200 sy 300
2. Fonenana vy P, F, FL, T, FA, FB, FC, HA sns
3. Mitondra baoritra lalina (habe kely sy habe antenatenany) amin'ny santimetatra na metrika
4. Taper roller miaraka amin'ny andiany santimetatra sy metrika (kalitao ambonin'ny P0 - kilasy P6)
Miorina amin'ny fahamendrehana sy ny tsy fivadihana, ny fitazonana ny kalitao voalohany no politikan'ny orinasanay.
Izahay dia hitazona sy hanitatra ny tsenanay amin'ny kalitao tsara indrindra, ny vidiny ary ny serivisy. Izahay dia te-handeha bebe kokoa ary hitombo hatrany eo amin'ny sehatry ny fiterahana.
Tongasoa amin-kafanam-po ireo mpividy malala rehetra, mitazona ny fiaraha-miasa matoky miaraka aminay.